ONLF Oo Si Cadho Leh Uga Jawaabtay Qoondadda 5% Ee Soomaalidu Ku Yeelanayaan Shidaalka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
ONLF Oo Si Cadho Leh Uga Jawaabtay Qoondadda 5% Ee Soomaalidu Ku Yeelanayaan Shidaalka
Hargaysa (SDWO): Jabhadda ONLF ayaa wax aan la aqbali Karin ku tilmaamay in shidaalka laga helay degaanka Soomaalida Itoobiya 5% ay ku yeeshaan, isla markaana ay u arkaan hanti ay gaar u leeyihiin Soomaalidu.
Qaadacaadani ayaa ka dhalatay kadib markii raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo booqasho ku marayay Maraykanka mar uu la kulmay jaaliyadda Itoobiyaanka uu sheegay in shidaalka ay Soomaalida ay ku yeelanayaan 5%.
Af-hayeenka jabhadda ONLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge (Caddaani), oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in iyadoo ay dadka Soomaalidu dhibaatooyin badan ka tirsanayeen dawladda Itoobiya aanay suuro gelaynin in la yidhaahdo boqolkiiba shan ayay ku yeelanayaan fa’iidadda shidaalka degaankoodda laga helay.
“Hantidda anagu Itoobiya lama lihin, awoodana lama lihin. Waxaanu nahay ummad la gumaysanayay muddo dheer, dagaal dheer soo gashay, oo xasuuq loo gaystay. Markaa dood weyn ayaanu ka qabnaa arrintaana mana aqbalayno.
Shacbiga Soomaaliyeed waa in uu Sayid ka noqdo hantidiisa, hantidaana Soomaali baa iska leh. Hantidda (shiidaalka) 5% ayay ku leeyihiin Soomaalidu, ma suuro gelayso”ayuu yidhi Cadaani Hirmooge oo u waramay VOA isagoo ku sugan dalka Australia.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Luuqadayadu way ku yasan tahay Itoobiya, qawmiyadda saddexaad ayaanu nahay xagga tiradda dadka, dhulka qoladda labaad ayaanu nahay. Qawmiyadda keliya ee la odhan karo waa la gumaystaa ayaanu nahay haddii lagu dhereriyo hal-beegyadda qawmiyadaha kale”.
Geesta kale raysal wasaaraha Itoobiya markii uu la hadlayay jaaliyadda Itoobiyaanka ee Maraynka ku nool wuxuu ku booriyay in ay dalkoodda dib ugu soo noqdaan, isla markaana horumarkiisa ka wada shaqeeyan dalkana ay wada leeyihiin.
Hase yeeshee Cadaani Hirmooge, ayaa hadalka raysal wasaaraha ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin arrintaasina aan la isku racsanayn. Jabhadooduna ay aaminsan tahay aragtidaa ka duwan oo ah in bulshadda Soomaalida Itoobiya lagula kacay xad-gudub iyo faquuq.
Waxaanu yidhi “Dal qudha in aanu isku nahay yaa ogol? Taa waa in laga heshiiyaa. Itoobiya yaa la yidhaahdaa? Waana in lagu heshiiyo Af-ka, calanka, taariikhda iyo khariirrada Itoobiya.
Anagu haddii aanu Soomaali nahay wax gaara ayaanu tirsanaynaa, mag-dhaw gaara ayaanu tirsanaynaa. Dad laga faquuqay Itoobiya hantideeda iyo dawladnimadeedda iyo calankeedda ayaanu nahay. Dad lagu waajahay in la fogeeyo ayaanu nahay.
Markaa khayrkaadka dalka ama shiidaalka 5% ayaad ku leedihiin iyo dalka waynu wada leenahay, naguma filna arrintaasi”.
Dhinaca kale madaxweynaha dawlad degaanka Soomaalida Itoobiya oo hadal ka jeedinayay 28-kii bishii June ee sanadkan maalintii la furay ceelasha shiidaalka wuxuu sheegay in dadka Soomaalida degaanku ay dhaqaale ahaan shidaalkaasi ku leeyihiin 40%.
Balse af-hayeenka ONLF wuxuu sheegay in aanay madaxweynaha kilinka Soomaalida Itoobiya mwqifkaasi ku raacsanayn. “Anagu lama qabno. Hantidan 100% Soomaalida ayaa iska leh. Goorma ayay Itoobiya nala yeelatay? Itoobiya xoog ayay nagu qabsatay. Sidee ayay rabaan in lagu wada joogo?”ayuu yidhi Hirmooge.